बीरगंज स्थित कोभिड १९ अस्पतालको सयोजकको गाडी तोडफोड – Easykhabar : Get News Easily
बीरगंज स्थित कोभिड १९ अस्पतालको सयोजकको गाडी तोडफोड
in प्रदेश समाचार, बिशेष समाचार
बीरगंज स्थित कोभिड १९ अस्पतालको सयोजक डा. उदयनारायण सिहंको गाडी अज्ञात व्यक्तिहरुले तोडफोड गरेका छन् । केहिव्यक्तिहरु आइतबार बिहान १० बजे अस्पतालको कम्पाउण्डमा प्रवेश गरि पार्किङमा राखिएको गाडी तोडफोड गरेको डा. सिंहले हाम्रो सम्बाददातालाई बताउनुभयो । उहाँले अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा समेत तोडफोड गरिएको बताउनुभयो ।
दिनरात नभनी नागरिकको सेवामा खटिएका छौँ हामीलाई नै आक्रमण गरिएको छ यो निन्दनीय घटना भएको उहाँले बताउनुभयो । महामारीमा डाक्टरमाथि यसरी सांघातिक आक्रमण भयो भने झन् कोरोना रोकथाम कसरी सम्भव हुन्छ भनेर उहाँले प्रतिप्रश्न गर्नुभयो ।
यसैसम्बन्धमा विरजंगमा रहेका चिकित्सकहरुको भेलाले डाक्टरको सुरक्षा हुनुपर्ने भन्दै जिल्ला प्रशासनमा कार्यालयमा बिज्ञप्ति बुझाएका छन् । डाक्टरको सुरक्षा भएमात्रै कोरोना संक्रमण रोकिने भन्दै दोषीउपर कारवाही र डाक्टरको सुरक्षा माग गरिएको छ ।